Paris – Unesco : hihira ny frankofonia i Lalatiana sy Nicolas Fraissinet | NewsMada
Frankofonia, ambetin-dresaka sy malaza amin’ny fampahalalam-baovao hatrany ivelany any. Herinandron’ny frankofonia mantsy ny 12 hatramin’ny 20 marsa izao. Fa anisan’ny hetsika miavaka indrindra ny karakarain’ny foiben’ny Unesco na ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny fanabeazana, ny siansa ary ny kolontsaina, any Paris.
Mikarakara seho mitondra ny lohateny hoe « La francophonie en chantant » izy ireo, ny alakamisy 17 marsa izao. Ny tena hafakely, mpanakanto roa no haneho ny talentany mandritra ny ora roa ka Malagasy ny iray. Tsy iza izany fa i Lalatiana, tsy zovina amintsika intsony. I Nicolas Fraissinet, mpanoratra sy mpamoron-kira ary mpitendry piano, metisy frantsay sy soisa, kosa no hanampy azy. Tsara ny manamarika fa ny Unesco no nisafidy azy mianadahy ireto, izay samy mirona kokoa amin’ny jazz sy ny blues.
Hanentana sy hanafana izao fotoana natokana ho an’ny teny frantsay sy ny frankofonia izao kosa ilay mpampihomehy, teratany belza, Bruno Coppens. Araka izany, hanana ny toerana ihany koa ny fampihomehezana mandritra ity hetsika « La francophonie en chantant » ity.